Otu esi edekọ ọdịyo dị elu site na Weebụ Martech Zone
Iji nweta azịza dịka Skype, sọftụwia teleconference, na VOIP, ị ga-eche na ịdekọ mmadụ abụọ gafee ụwa site na ibe ha ga-abụ ihe kachasị mfe n ’ụwa. Ọ bụghị. Ma ọ bụ nnọọ na-akụda mmụọ.
Chọpụta, ọ bụrụ na ị nwere ndị folks abụọ nwere akụrụngwa magburu onwe ya na nnukwu bandwidth, enwere ike ịme ya. Nsogbu a na aputa mgbe inwere ndi obia na Podcast gi site na gburugburu uwa ndi n’enweghi ngwaike ma obu bandwidth. Ihe si na ya pụta bụ na ị na-enwekarị ajụjụ ọnụ ebe ị na-ada ụda dị ịtụnanya, ndị ọbịa gị na-ada ka ha nọ na eriri na tin.
Nnukwu ọdịyo dị elu na-eri 320kbps ma ọ bụ karịa bandwidth, yabụ, ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka ọrụ nnyefe ọdịyo iji mpikota ma ọ bụ mechie ọdịyo iji belata ihe bandwidth ha chọrọ ma ọ bụ iji baara ndị ahịa uru obere bandwit. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ dịghị mma maka gị mgbe ị na-edekọ.
Ka anyị jee ije site na ụfọdụ nyiwe olu na okwu ọnụ:
Skype - Ọ bụ ezie na a na-anakwere Skype ma na-enwekarị ya na firewalls ụlọ ọrụ, ọdịyo a na-ebute site na ya anaghị adịkarị mma. Ọbụna na nnukwu igwe okwu na bandwidth, ụda ahụ nwere ike ịbelata ma ghara ikwesị ntụkwasị obi nke isi mmalite ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ị na-na-tinye n'ọrụ a Skype edekọ, ị nwere ike na-arụ ọrụ onwe ha na onye ọ bụla olu track.
Ekwentị Teleconference - Skype maka azụmahịa, Webex, GoToMeeting, Uberconference… niile nyiwe siri ike mana ha nwere ole na ole ndọghachi azụ. Nke mbụ, ọ bụghị mmadụ niile na-eji ha eme ihe. Nke abuo, ụlọ ọrụ na-egbochi ọdụ ụgbọ mmiri ndị nwere ike ịchọ ngwanrọ ahụ. Nke atọ, ọ bụghị mgbe niile ka ha nwere mma dị mma, ma. Nke anọ na nke kachasị njọ - ọ bụrụ na a kagbuo gị, ọtụtụ nyiwe anaghị enye gị ohere ịbanye ọzọ.
VOIP - ị ga - eche mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị afọ na ọkara nke teknụzụ ekwentị na anyị ga - enwe mmeri a. Anyị adịghị. Teknụzụ VOIP dị ebe niile, mana ọ bụ ọgbaghara. Often na - ejikọkarị ọtụtụ ọrụ na akwa, na - agbakwunye ụda ohere maka nsogbu. Na, dịka na teknụzụ nkwukọrịta ndị ọzọ, ha na-enye ohere maka ikwesi ntụkwasị obi dị ala iji mesoo ikike dịgasị iche iche nke ndị ahịa ha.
Obi dị m ụtọ, pọdkastị arịgoro n'ọkwa dị otú a na enwere ọrụ ole na ole na-apụta iji merie nsogbu ndị a.
Ọrụ Ndekọ Podcast
BlogTalkRadio - anyi nwere otutu ndi na eso uzo na BTR mana anyi mechara hapu ya n’ihi nsogbu di nma n’elu ikpo okwu ha. Anyị meriri hapụ ezigbo ntanetị weebụ ha kpamkpam wee họrọ maka ịdebanye ọdịnaya anyị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-amalite amalite, chọọ ihe dị mfe, nke a nwere ike ịbụ azịza ziri ezi. Na ọchịchọ anyị maka ọdịyo dị ukwuu, ọ bụ bust.
Bodalgo - Bodalgo abụghị ọrụ emere ka ọ rụọ ọrụ maka nke a… e wuru ya maka ịchọta olu na ntụgharị nka n'ịntanetị yana ka ha dekọọ nsonaazụ ahụ. Agbanyeghị, Bodalgo akwalitewo ọrụ maka ndị pọdkastị ka ewere. Get nweta URL pụrụ iche ebe ọbịa gị na-ejikọ, na-enyere ikike iji igwe okwu ha, ị jikọọ ma nwee ike ịdekọ nkwupụta ụda dị elu na mpaghara. Bodalgo kwukwara n'oge na-adịbeghị anya ike vidiyo!
NKP - ipDTL ga - agbal? ọgbọ na ọgbọ njikọ dị n'etiti ndị ọbịa ma na-enye interface dabeere na Chrome maka ịdekọ ọdịyo ahụ. Ọrụ a na-abịa na peeji ngosi ngosi raara onwe ya nye na ndị ọbịa nwere ike ịpị ma ọ bụrụ na ha chọrọ.
NT .R. - ọrụ a nwere ike ịnwe ntuli aka m dịka nhọrọ kachasị mma, mana ọ ka na-enweghị oke ike. Ihe kpatara m ji dabere na ntụziaka a bụ na RINGR na-enye ma ụdị desktọọpụ na ngwa mkpanaka. Y’oburu n’inweta onye obia gi ka iwere ngwa mkpanaka ma ha nwere igwe okwu, igha azumahia!
Isi Iyi-Jikọọ - Industrylọ ọrụ-ọkọlọtọ ISDN nnọchi na a miri emi mma-setịpụrụ maka gị niile n'ime ime audio ọdịyo na nlekota mkpa. Dekọọ ma nyochaa site na ebe ọ bụla n'ụwa, na-eji ngwaọrụ ọkachamara gị.
Onyekachi - Anyị na-akọrọ banyere Onyekachi tupu, a oké multi-track online ndekọ ọrụ maka pọdkastị. O di nwute, ọ choro ihe nchọgharị desktọọpụ nke chọrọ ikike maka igwe okwu.
Ma olee maka igwe okwu ahụ? Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ kpọmkwem gị Mac ma ọ bụ iPhone, M a nnukwu ofufe nke MiC 96k Apogee. Ọ bụrụ na ị bụ onye pọdkastị nke na-agagharị ma chọọ ịdekọ otu ma ọ bụ karịa ndị ọbịa si na iPhone gị, Shure zitere m MV88 igwe okwu condenser, ọ dịkwa ịtụnanya!
Cheta na: You'll ga-ahụ ụfọdụ nnwale dị ukwuu nke Zencastr, RINGR, na IPDTL nke ugbu a, ebee Adam Ragusea dere ederede miri emi na ọrụ ọ bụla na ike ya.
Ngosipụta: Anyị bụzi mmekọ nke RINGR ma jiri nke anyị njikọ mmekọ na post a. Anyị jikwa njikọ njikọta nke Amazon maka igwe okwu.
Tags: blogtalkradiobodalgooku ogbakoipdtlAhịa Podcastọgbọ na ọgbọọrụ PodcastPodcastingmgbanakaskypeteleconferenceVoIPzencastr
Doug, RadioYo bụ nyiwe ọzọ nke na - enye gị ohere ịdekọ ọdịyo. Nwere ike iji ikpo okwu ụzọ abụọ. Can nwere ike ibi ndụ ngosi ma nwee ọtụtụ ọbịa na ndị na-akpọ oku na-akpọ ma ọ bụ bulite ngosipụta Podcast. Otu esi eji ikpo okwu a dị n'aka gị, otu ụzọ ọ bụla dịkwa n'efu.